Efatra isan’andro ny fanafihana mitam-piadiana : miparitaka ny basy ao Toamasina | NewsMada
Efatra isan’andro ny fanafihana mitam-piadiana : miparitaka ny basy ao Toamasina
Mikaikaika, miantso vonjy mihitsy aza, noho ny firongatry ny tsy fandriampahalemana ny mponin’i Toamasina. Efatra isan’andro ny fanafihana mitam-piadiana hita sy re. Miparitaka loatra ny fitaovam-piadiana, ny basy mahery vaika…
Ny mpivarotena hamonjy fodiana aza iharan’ny fanafihan-jiolahy mitam-basy. Tena mampiaiky ny rehetra mihitsy ny tsy fandriampahalemana ao Toamasina amin’izao fotoana izao. Isan’andro, tsy maintsy andrenesana trangana fanafihana mitam-piadiana mahery vaika ao an-toerana. Na amin’ny antoandrobenanahary na amin’ny alina, tsy tahotra, tsy henatra fa sahy manao ny asa ratsiny ireo jiolahy. Mitondra faisana na ireo mpandeha an-tongotra na ireo mpividy entana eny amin’ny tranombarotra na ireo mandeha posy na tuctuc. Manginy fotsiny, ny fanafihana tokantrano sy ny toeram-pivarotana miafara amin’ny vonoan’olona. Zary lasa malaina tsy te handeha hihazo an’i Toamasina ny ankamaroan’ny olona sasany noho ny tahotra ny tsy fandriampahalemana. Tebiteby lava kosa ny iainana ho an’ireo tsy afa-manoatra. Dradraina anefa fa hoe renivohitry ny lafiny toekarena i Toamasina noho ny fisian’ny seranan-tsambo goavambe fivezivezen’ny entana miditra sy mivoaka eto amintsika. Renivohitry ny tsy fandriampahalemana ihany koa anefa izy amin’izao fotoana izao ary ahina ho faritra mena mihitsy aza raha tsy misy ny fandraisana andraikitry ny fanjakana. Tsy misy paikady matotra avy amin’ny fanjakana entina hamongorona ny asan-jiolahy ao Toamasina na eo aza ny ezaka ataon’ny polisy sy ny zandary ao an-toerana. Avy aiza ny fiavian’ireny fitaovam-piadiana mahery vaika eny am-pelatanan’ny jiolahy ireny? Manahy ny rehetra fa misy ny firaisana tsikombakomba eo amin’ireo mpitandro filaminana sy ny jiolahy. Vao ny herinandro lasa teo ilay miaramila tratra namaky magazay niaraka tamin’ireo jiolahy namany. Izany hoe tsy misy azo antoka intsony fa na ny mpitandro filaminana sasany aza lasa manao asan-jiolahy. Manaratsy endrika ireo namany anefa izany.
Raim-pianakaviana iray mbola ao amin’ny Hopitalibe…
Hatreto, tsy mbola nisy sahy nitonona hoe tobi-miaramila atsy na aroa no nivoahan’ny basy tratra. Raha ny zava-misy, tsy latsaky ny efatra isan’andro ny trangana fanafihana mitam-piadiana ao Toamasina tao anatin’ny iray volana izay raha ny fanadihadiana.
Tsiahivina fa jiolahy nitam-piadiana mahery vaika no nifanehatra tamin’ny polisin’ny Fip tao Antsarakofafa Toamasina, afakomaly ka lavo nandritra ny fifampitifirana ny roa amin’ireo jiolahy. Fantatra nandritra ny fanadihadian’ny polisy fa ilay jiolahy iray maty antsoina hoe Fredo ny anarany, nandray anjara tamina raharaha fakana an-keriny niseho tao Toamasina ary efa nokarohin’ny polisy hatry ny ela, kanjo izao nifanehatra tamin’ny polisy izao.
Fanafihana mitam-piadiana roa ihany koa no nifanindran-dalana tamin’io fanafihana io : ny teo amin’ny fiantsonan’ny taksiborosy ao Tanambao Fahadimy. Raim-pianakaviana iray voatifitra, lasan’ireo jiolahy ny vola 8 tapitrisa Ar. Mbola manaraka fitsaboana ao amin’ny Hopitalibe Toamasina ilay raim-pianakaviana voatifitra. Faharoa ny tao Antsiranampasika, vola 3 tapitrisa Ar vidina omby, indray voaroban’ny jiolahy.